CentOS ee shabakadaha kombiyuutarka ee loogu talagalay SMEs | Laga soo bilaabo Linux
phico | | Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan halkan ku qoraa sadarka koowaad ee goobta wiki.centos.org Ku saabsan tan qaybinta ballaaran:
CentOS Linux waa qaybinta bulshada ay dayactireyso oo laga soo qaatay baakado ilo ah oo loo sii daayay dadweynaha Red Hat waayo, Linux Hat Enterprise Linux (RHEL). Sidan oo kale, CentOS Linux waxay diirada saareysaa inay si firfircoon ula jaanqaadi karto RHEL. Mashruuca CentOS wuxuu badiyaa beddelaa xirmooyinka si looga saaro calaamadaha ganacsiga iyo farshaxanka Red Hat. Qeybinta CentOS Linux waa lacag la'aan mana aha inaad lacag ka bixiso. Nooc kasta oo ka mid ah CentOS waxaa lagu hayaa 10 sano (iyadoo loo cusbooneysiinayo amniga - muddada u dhexeysa dayactirka ayaa ku kala duwanaa waqti ka dib marka la eego xirmooyinka ilaha la sii daayay). Nooc cusub oo CentOS ah ayaa la siidaayaa qiyaastii 2dii sanoba mar nooc kasta oo ka mid ah CentOS-na si isdaba joog ah ayaa loo cusbooneysiiyaa (6dii biloodba mar) si loogu daro qalab cusub. Tani waxay keeneysaa nabadgelyo, dayactir hoose, la isku halleyn karo, la saadaalin karo, iyo jawiga Linux.
1 Maxaan sidoo kale wax uga qori doonnaa CentOS?
2 Maxaa ku dhacaya kiiskeyga gaarka ah?
3 Maxaan ku sameyn doonaa maqaalada soo socda?
Maxaan sidoo kale wax uga qori doonnaa CentOS?
Waddankeyga, Cuba, Waxaan ku dhiiran karaa inaan xaqiijiyo taas, Qaybinta Linux ee inta badan maanta loo isticmaalo heerka ganacsiga ee server-yada ayaa ah CentOS, Ubuntu, Debian, iyo bixiyeyaasha gelitaanka internetka, FreeBSD. Qaybinta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa RHEL, OpenSUSE, SUSE iyo kuwa kale. Waxaa jira adeegsi xoog leh oo ah 'distros' .deb y .pm.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, ma aanan aqrin tirakoobka rasmiga ah ee ku saabsan isticmaalka Software-ka Bilaashka ah ee wadankeyga, taas oo micnaheedu uusan aheyn inaysan jirin. Daraasad dhab ah oo ku saabsan mowduuca waxaa laga heli karaa goobta GUTL ka yimid Cuba.
Maxaa ku dhacaya kiiskeyga gaarka ah?
Marar badan ayaan akhriyey faallooyin taas ku saabsan, Laga soo bilaabo Linux, waxay wax uun ka qortaa Ubuntu ama Debian. Shakhsi ahaan, khibradeyda soo-saarista waxay u badan tahay Debian oo sida muuqata xaqiiqdaasi waxay si weyn u saamaysay qoraalkayga.
Waxa kale oo jira dhinaca kale ee dukumeentiyo la heli karo Isbaanish ku saabsan Debian GNU / Linux. Maaddaama ay aad u yar tahay, waxaan isku dayay wax badan baa jira ay heli karaan dhinacyada xiisaynaya.
Dad badan baa og inay jiraan maqaallo aad u fiican, wikies, forums, goobo, iwm, oo loogu talagalay dukumiintiyada qaybinta sida RHEL, Fedora, Ubuntu, iyo guud ahaan qaybinta aan la xiriirin, in si uun loo dhigo oo aan dambi lahayn, oo leh Ruux buuxa oo ah Software Bilaash ah.
Waxaan u maleynayaa in sababta ugu weyn ee dukumiintiyada ugu fiican ay tahay qaybinta RHEL wuxuu ka socda Shirkadda Red Hat Inc.; Ubuntu waxaa maalgeliya Shirkadda Tilmaaml; mashruuca CentOS waxay ka tarjumaysaa boggeeda internetka muhiimadda ay leeyihiin Damaanad qaadayaasheeda - Damaanadqaadayaasha horumarkiisa, halka Fedora -distro u janjeedha desktop-ka waxaa si toos ah u kafaala qaadaya shirkadda Red Hat Inc. Waa inay wax badan qabataa-oo aad u badan-iyadoo la kaashanayo taageerada farsamo ee la siiyo macaamiisheeda.
Haddii aad rabto inaad fikrad ka hesho waxa aan ula jeedo, isku daawee laba jeer booqashokiiba Sameynta shaqo aan xadhig lahayn ee laptop-kaaga (ama desktop-ka) oo ka mid ah wiki.centos.org, iyo tan kale loogu talagalay wireless oo ka mid ah wiki.debian.org.
Debian GNU / Linux, Nidaamka Howlgalka Universal, Waa Mashruuc inta badan ay fuliyaan mutadawiciin, xitaa haddii ay leedahay maal-galiyeyaasheeda. Mashruuc ahaan si aad ah ayaa loogu qeexay iyada Qandaraaska Bulshada Debian.
Maxaan ku sameyn doonaa maqaalada soo socda?
Ka dib markii qaybtii loogu talo galay Virtualization-ka ay dhammaato, waxaan u qori doonnaa isla maqaallo qeybtaas ah, oo lagu daray midka loogu talagalay mowduuca miisaska, oo ku saabsan CentOS.
Waxaan u maleynayaa in istiraatiijiyaddan, qaybinta ku-habboon ee xirmooyinka lagu daboolayo .deb horeba .pm. Dhinaca kale, dhinac ama qaab kale, ayaynu tixraaci doonnaa Jirridda ama qaybinta hore ee gudaha Linux.
Waxaan rajeynayaa inaan ku qanciyo akhristayaal badan dadaalkan cusub. Waad u qalantaa. Waan u qalannaa jawaab celintaada, adoo adeegsanaya faallooyinka iyo / ama e-mails.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » CentOS ee shabakadaha kombiyuutarka ee SMEs
Waan salaamayaa dhamaan akhristayaasha !.
Waxaan sidoo kale ku dari doonaa qeybinta OpenSUSE munaasabadda Shabakadaha Kombuyuutarka ee loogu talagalay SMEs. Maxaad u malayn?
Kusoo dhawow OpenSUSE
Yuusuf Gil dijo
Hambalyo, waxay ahayd lagama maarmaan in la bilaabo akhriska tilmaamahan sidoo kale CentOS .. Waa midka aan ku isticmaalno jaamacadeena
Jawaab Jose Gil
Salaan José Gil!. Way fiicnaan laheyd in horey loo sii ogaado, mowduucyada aad xiisaha u leedahay?, Si aad u aragto haddii aanan midkoodna ku darin xitaa taxanaha maqaallada ee aan horay u soo gudbineyno. Waad ku mahadsantahay faallooyinka.
dadaal aad u fiican, maahan wax walba ubuntu ama debian, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay, waxaan rajeyneynaa in naloo keeno iyo waxa aad ku caawin karto farxad.
Ku jawaab josspcr
Waad ku mahadsantahay dadaalka wanaagsan, @josspcr.
Bishii Sebtember 15, 1993, Debian sii daayay 0.01 ayaa la sii daayay. Bishii Nofeembar 3, 1994, Red Hat waxay sii deysay sii-deynti ugu horreysay ee markaa Red Hat Linux, oo la joojiyay 2003 iyada oo loo rogay RHEL. Bishii Sebtember 17, 1993, Slackware wuxuu sii daayay sii deyntiisii ​​ugu horreysay. Qaybintaan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin "kuwa ugu da'da weyn ama waalidiinta" ee hadda jira Linux. Ubuntu wuxuu ku abtirsadaa Debian, iyo SUSE oo ka yimid Slackware. CentOS waa xinjiraha labka ah ee RHEL.
Waxaan u maleynayaa in soo jeedinta in lagu daro CentOS iyo OpenSUSE, waxaan wax ka qori doonaa farcanka ugu fiican laba ka mid ah "Saddexda Ayeeyo". Sidoo kale ma joojin doonno la macaamilidda Awoowe Debian si toos ah. 😉
Mahadsanid Cent CentOS ma la timid nooca Gnome 2? Sababtoo ah waan rakibey oo isweydaarsiga ay bixiso ma ahan mid casri ah, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay maxaa yeelay waxay diiradda saareysaa server-yada oo kuma xirna isticmaaleha ugu dambeeya, laakiin ma ogi haddii tani run ahaantii tahay kiiska.
Mahadsanid Cent CentOS ma la timid nooca Gnome 2? KDE 4.14? Sababta oo ah waan rakibey oo isdhaafka ay bixisaa ma ahan kuwa casri ah, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay maxaa yeelay waxay diiradda saareysaa server-yada oo kuma xirna isticmaaleha ugu dambeeya, laakiin ma ogi haddii tani run ahaantii tahay kiiska.
Taasi waa sababta. Waxaa intaa dheer, waxay u badan tahay inaysan lahayn darawallada kaararka wireless, kaarka fiidiyowgu ma shaqeynayo 100%, ama waxaad leedahay arrin isticmaale-dhamaadka ah.
Sababtoo ah CentOS waxay si gaar ah diiradda u saartay server-yada.
Jawaab Gonzalo Martinez
Salaan Alejandro. Iyadoo la adeegsanayo CentOS iyo Red Hat Enterprise Linux, waxay la mid tahay sida Debian. Iyagu waa nidaamyo hawlgal oo diiradda lagu saaray in loo adeegsado server-yada iyo xarumaha shaqada ama "Station Station". Waxay caan ku yihiin xasilloonida, amniga iyo isku halaynta. Sida caadiga ah, diirkooda ama xabxabkoodu maaha kii ugu dambeeyay, laakiin kuwa ugu xasilloon ayaa lagu tijaabiyay jawiga wax soo saarka.
Inta lagu jiro rakibidda CentOS, waxaad kala dooran kartaa GNOME 3.14 iyo KDE 4.10.5 desktop-yada. GNOME waa midka aan soo jeedineyno, maadaama Red Hat Inc. ay mas'uul ka tahay maalgelinta horumarinteeda.
Nabade Gonzalo. Waad ku mahadsantahay faallooyinka. Waxaan haystaa wakhti adag oo aan ugu hadlayo si buuxda ereyada Linux. Haddii aad raacday qoraalladayda waxaad ogaan doontaa in muddooyinkan dambe kiisaska intooda badan "waan soo jeedinayaa" marar aad u yarna "waan kugula talinayaa". Waa maxay CentOS daahir Ujeedo adeege, waa sheegasho geesinimo leh. Waan ogahay dhowr ka mid ah maamulayaasha shabakada ee u isticmaala CentOS kombuyuutarkooda, oo xitaa ha ku ciyaarin agagaarka iyaga oo u sheegaya inay u wareegaan Fedora ama OpenSuSE. Dhinaca kale, waxaa jira farqi yar oo fikradeed oo u dhexeeya PC iyo Saldhigga Shaqada. Tarjumaadda labaad waxay muujineysaa "Saldhigga Shaqada." Aniga qudhaydu waxaan ka shaqeynayay in ka badan sanad server-ka 512 megabytes oo RAM ah iyo 8 megabyte oo video RAM ah, wax intaas ka badan ma jiraan, mana aanan dhiibin jawigeyga garaafadeed, in kasta oo xaqiiqda ah in adeegahaas uu shaqeynayay-walina uu u shaqeynayo-sidii server faylka iyada oo loo marayo Samba. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad isku daydo oo aad rakibato CentOS sida Desktop. Tag oo hagaaji ra'yiga ku saabsan. 😉
Waxaan ilaaway inaan ku daro mid ka mid ah xulashooyinka ay bixiso rakibayaasha CentOS inta lagu jiro howsha rakibida waa ta saxda ah "GNOME Desktop". Hadday ahaan lahayd mid si toos ah u janjeedha midiidinka ... Mid kastaa ha ku soo gunaanado gabagabada adoo adeegsanaya tababar, taas oo ah mid ka mid ah shuruudaha ugu fiican ee runta.
Miyayna ku xirnaan kartaa nooc ka mid ah Centos qalab shaqsiyeed laptop? Waxaan ka fekerayaa dhammaan wareegga dayactirka ee qaybintaani leedahay. Hadda kuma dhaqmi doonto korontada maalin walba. Ma jiraa qof adeegsaday Centos shaqsi ahaan?
Denis Cantillo dijo
runtii boostad wanaagsan, mid kale oo tayo sare leh, ha joojin qoraalka
Jawaab Denis Cantillo
Dilka 1990 dijo
hello, iyo salaanta holguin ... (waan ka xumahay la'aanta astaamaha Isbaanishka iyo lahjadaha, kiiboodhka jarmalka)
Waxaan ku helay maqaalka si kedis ah waxayna ila noqotay wax aad iigu wanaagsan. Shaqo aad u wanaagsan waxaanan rajaynayaa in tikniyoolajiyadaha bilaashka ah, gaar ahaan Linux distros ay door weyn ka qaataan arrimaha gobolka oo ay bilaabaan inay qabsadaan meelaha guryaha muwaaddiniinteenna aan isticmaalin kombuyuutarka oo keliya inay ku ciyaaraan DOTA, hahaha ... I in Xaaladdayda, waxaan ku haystaa 3 PC (Macbook iyo 2 desktop) guriga, dhammaantoodna waxay leeyihiin nidaamyo Linux ah (marka laga reebo MacOS X, unix base on laptop), laba waxay leeyihiin Mint 3 Mate (18 desktop iyo laptop-ka) Nidaam ahaan marka laga tago) iyo mida kale ee aan u isticmaalo adeege ahaan waxay leedahay Debian 1 maxaa yeelay waxaan u haystaa sida loo wada dhan yahay (UPnP server, OwnCloud, Router, DNS, DHCP iyo HTPC with Kodi) ... markasta qof ayaa imanaya gurigayga cusub waa hadal la'aan shaqooyinka aan haysto qaar badanna waa hore u haajireen, in kasta oo ay xusid mudan tahay in dhammaantoodba leh laba geesood wada jir ah iyo Windows ...
Sikastaba, waxa aan rajaynayo ayaa ah in qofkasta oo wadankeena kamid ah uu noqon karo "xor" maalin maalmaha ka mid ah, maalinta xukunka ugu dambeeya halkaas oo ay ku bixin doonaan shatiyada iyo cusbooneysiinta tahriibka waqtigiisa. magaalada Los Angeles. beeraha nasashada, Jose ...
Linux Mint 18 Mate. MintOS mawduuc hdslayer1990@nauta.cu
Si sax ah ugama jawaabin faallooyinkaaga maxaa yeelay kuma aanan helin e-mayl ahaan ... waxyar bay dhacday bilowgii, laakiin mar dambe maahan ... aad baad ugu mahadsantahay fikradahaaga, Hdslayer
Ismaaciil Alvarez Wong dijo
Qoraallo kooban oo ku saabsan CentOS:
CentOS (Nidaamka Hawlgalka Bulshada ee 'ENTerprise Operator') ayaa si fiican looga yaqaan adduunka Servers. Nooca Desktop-kiisa maahan mid caan ah in kasta oo ay sii wanaajineyso muuqaalkeeda muuqaalka sanadba sanadka ka dambeeya.
Waa qaybinta ugufiican uguna isticmaalka badan Linux ee Servers sababo laxiriira adkaysigeeda iyo xasilloonideeda; Intaa waxaa sii dheer, ahaanshaha 100% ikhtiyaari ikhtiyaari ah Red Hat Enterprise Linux, waxay ka dhigeysaa lambarka 1 beddelka ah, RHEL, ee iibiyaasha VPS (Virtual Private Servers) ee ku jira Cloud.
Dabcan waxa hadda la xaqiijiyey waa kuwo si dhab ah loo beenin karo iyadoo loo eegayo aragtida "sysadmin" kasta.
Ugu dambeyntiina, sida ku xusan "10 Top Linux Qaybinta ugu Caansan ee 2016", waxay ku jirtaa 9.
Jawaab Ismael Alvarez Wong
Salaan Wong: Waan kugu raacsanahay 100%. Xaqiiqdii, sadarka koowaad ee maqaalka wuxuu ka turjumayaa waxaad ka leedahay wadankeena. Si kastaba ha noqotee. Debian ayaa ku jirta kaalinta 3aad barta distrowatch.com. 😉
Sida loo wanaajiyo Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo waxyaabaha laga helo Stacer
OpenShift U heellan ayaa laga heli karaa Google Cloud Platform